Kedu otu esi echedo nchebe iwu na azụmaahịa kọmputa? | ECommerce ozi ọma
N'ọtụtụ ikpe, na ọ dabara nke ọma, ịzụrụ ihe na Internetntanetị anaghị akpata nsogbu iwu maka abamuru nke ndị na-azụ ahịa n'onwe ha. Site n'inwe nchedo iwu na usoro ya zụta ihe na Internetntanetị. Mana agbanyeghị, ụdị nsogbu ọ bụla n'ụdị a anaghị akwụpụ yana yabụ ụlọ ọrụ nke e-azụmahịa Ha nwere usoro dị n'ime nke nwere ebumnuche nke ịkwalite ngwọta enyi na ndị ahịa.
N'ezie, ọ ga-amalite site na ọnọdụ akọwapụtara nke ọma na mpaghara ịntanetị. Ọ bụ onye ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na ịzụta Internetntanetị bụ nkwekọrịta adhesion, nke pụtara n'ezie ihe dị mkpa dị ka onye na-azụ ahịa enweghị ike ịkwado ma ọ bụ gbanwee nkwekọrịta na-achịkwa ire ahụ ọ mepụtara. Ihe na, n'aka nke ọzọ, anaghị eme na arụmọrụ site na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ.
Site na nke a n'ozuzu, ọ dị mkpa ịkọwapụta na European Union akwalitego okike nke nchebe iwu nke ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ, ọkachasị banyere mmepe nke echiche nke usoro iwu mkparị na nkwekọrịta na ndị na-azụ ahịa (ọkachasị, Ntụziaka 2011/83 / EU nke nzuko omeiwu Europe na nke Kansụl nke Ọktoba 25, 2011 gbasara ikike ndị ahịa). Na Spain, a na-etinye nchedo a na Consolidated Text of General Law for the Defense of Consumers and Users of 2007. N'okwu a, anyị nwere mmasị karịsịa ịkọwapụta isiokwu ya 90.
1 Nchedo iwu na ịzụrụ n'ịntanetị
2 Ngwaọrụ iji chebe ndị ọrụ
3 Uru nke inwe nchebe iwu
4 Kedu ka usoro iwu maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị?
5 Ihe mkpuchi mkpuchi amortization
Nchedo iwu na ịzụrụ n'ịntanetị
Otu n’ime ihe elebara anya nke ọma iji chebe nchebe iwu a bụ nke metụtara okwu mkparị na arụ ọrụ ha. Ebee ka a ga-atụle ihe ndị na-esonụ anyị ga-ekpughe n'okpuru.
Ntinye aka na mkpezi ndị ọzọ na-abụghị mkpezi ndị ahịa, belụsọ n'ihe banyere ngalaba mkpezi ụlọ ọrụ nke usoro iwu kwadoro maka ngalaba ma ọ bụ otu okwu.
Inye nkwekọrịta nkwekọrịta doro anya na Onye ọka ikpe ma ọ bụ Courtlọ ikpe na-abụghị nke kwekọrọ na ebe obibi nke ndị na-azụ ahịa na onye ọrụ, ebe mmezu nke ọrụ ma ọ bụ ebe ihe onwunwe dị ma ọ bụrụ na ọ bụ ala na ụlọ.
Ntube nke nkwekọrịta a na iwu mba ọzọ banyere ebe ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ na-ekwupụta nkwupụta ha na azụmaahịa ma ọ bụ ebe ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ ahụ iji kwalite nkwekọrịta nke otu ụdị ma ọ bụ nke yiri ya.
Ngwaọrụ iji chebe ndị ọrụ
Inweta ngwaahịa na ọrụ site na esntanetị na-eweta ihe egwu nye onye na-azụ ahịa nke yiri ahịa ahịa ndị ọzọ nke enweghị mmekọrịta anụ ahụ n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa. Via usoro nke ikike dị ka ndị anyị ga-ekwu banyere ha site ugbu a gawa.
Ikike ikwupụta eziokwu, dị irè, zuru ezu, uzo na emelitere banyere ọnọdụ ndị ọrụ yana nkwa nke iwu kwadoro.
Ikike ịnata ọrụ ngwaahịa yana mmesi obi ike dị mma, yana ịnweta ozi yiri nke a, nke dị mkpa na emelitere banyere ogo ọrụ.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ dịkwa oke mkpa ịtụle eziokwu ahụ bụ na iwu metụtara nchekwa nke ikike ndị ahịa dịgasị iche site n'otu mba gaa na mba ọzọ yabụ na ọ dị mkpa ịmara iwu dị ugbu a na mba ebe bụ n'ji. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ọgwụgwọ nke mgbasa ozi raara nye ụmụntakịrị nwere ụzọ mgbochi ma ọ bụ nke nwere nkwenye dabere na mba ahụ.
Dị ka mwepụta nke ikike data nchedo. Ọ bụ ikike ọzọ nke na-egbochi mgbasa nke data nwere ike inye ozi gbasara mmadụ site na nke a ga-esi amata ya ma ọ bụ nwee ike wepụta akụkụ nke ụdị mmadụ ha. Na nke anyị ga-arara isiokwu ọzọ iji kọwaa ya n'ụzọ zuru ezu ka ndị ọrụ ahụ wee ghọta ya nke ọma.
Uru nke inwe nchebe iwu
N'ezie, ụdị nchedo a dabara adaba maka azụmaahịa na usoro ịntanetị n'ihi njirimara nke ya nke sitere na ọdịdị ya. Ebe ọ dị ezigbo mkpa ichekwa akụkụ ụfọdụ ewepụrụ na ụdị azụmaahịa ma ọ bụ ọdịnala ndị ọzọ. You chọrọ ịma ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa? Ọ dị mma ị ga-eleba anya ugbu a n'ihi na ha nwere ike inyere gị aka n'oge ụfọdụ n'ọrụ gị.
Ndụmọdụ gbasara iwu, site kwa na ntanetị nkwado.
Nchịkọta akwụkwọ: Nyocha na nyochagharị nke akwụkwọ metụtara ndụmọdụ ahụ.
Ọ na-ahụ maka mmefu nke iwu, dịka nhoputa nke onye ọka iwu ma ọ bụ onye ọka iwu, mkpuchi nke ụgwọ ọkachamara na nke ndị ọkachamara, yana mmefu iwu, yana arịrịọ na akụrụngwa.
Ikwu maka mmebi ewepụtara site na mbido na mmepe azụmaahịa gị.
Defensetụ isi: agbachitere na ụtụ isi mmiri ma ọ bụ usoro nkwado nke Taxtụ Isi.
Ikwu maka ngabiga nkwekọrịta maka ọrụ, ihe ibugharị ma ọ bụ ngwa ahịa.
Agbachitere ikike metụtara ebe obibi ma ọ bụ ebe obibi ebe ị na-arụ ọrụ ọkachamara gị.
N'aka nke ọzọ, ị gaghị echefu na njirimara a dabara adaba ma ọ bụrụ na ịchọrọ oge niile ịchọ, karịa ihe niile, azịza zuru ụwa ọnụ maka mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ijide usoro iwu ha na ihe a niile, na-enweghị mmebi nke ịhapụ oge ma ọ bụ ego maka mkpebi ya zuru oke.
Na nke nkiti mode Ọ pụtara na ịnweta ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọkachamara na Iwu na ngalaba ya niile site na telifon n'ụzọ na-enweghị njedebe, ịgbachitere n'ihe gbasara ụtụ isi, n'ụlọ na ọrụ, nkwado na usoro ederede dịka ịnye nkwekọrịta, ọrụ, ọrụ, ebubo maka mmebi anụ ahụ, nke mmụọ na nke ihe. , n'etiti ndị ọzọ.
Kedu ka usoro iwu maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị?
Site na ngwaahịa mkpuchi a ị ga-enweta ihe karịrị ndụmọdụ ekwentị dị mfe n'ihi na a ga-ekpuchi mmefu niile dị mkpa maka ịgbachitere ndị ọrụ, ọbụlagodi na ịnwe ikpe, site na mberede okporo ụzọ na nkewa ikpe, yana n'ihe ọ bụla Ọ bụrụ na ọ ga-adị ọnụ ala karịa na ị na-agakwuru ndị ọkachamara (ndị ọka iwu, ndị ọka iwu, notaries ma ọ bụ ndị ọkachamara) site na iwu enwere ike ịdebanye aha na-erughị 100 euro kwa afọ.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ amụma akọwapụtara nke ọma tinyekwuoro mkpuchi dị na njikọta ya na ụlọ ọrụ iwu, dịka usoro iji gbasaa mkpuchi nke ndị ahịa ha yana na ha nwere nnukwu nchekwa iwu, agbanyeghị na ọ bụ n'efu n'ihi na ewetara ya ego na akwụkwọ ọnụahịa. nyefere site n'aka ndị ọka iwu goro ego.
N'okwu ndị a, ndị inshọransị, ọ bụrụ na esemokwu esighi na iwu ahụ kpuchie, nwere ike ịga na netwọkụ nke ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ ịnshọransị nyere na-ere ngwaahịa a, nke mere na ndị inshọransị ga-akwụ ụgwọ ahụ, yana nwepu ego n’agbata 5% na 20% na ọnụego gọọmenti, n’agbanyeghi iwu iwu enyere gị. Ohere a nke ịgakwuru ndị ọrụ iwu ndị ọzọ nwere ọnụahịa ego dị na nkwupụta mkpuchi zuru oke, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na etinyeghị ha na nchịkọta ndị enyere ndị ahịa ha, yabụ na ọ dị mkpa iji gwa onye na - achọ mkpuchi ịchọrọ ịkwụ ụgwọ, ọ bụrụ na nke a bụ ọchịchọ nke ndị ịnshọransị.
Ihe mkpuchi mkpuchi amortization
N'okwu a, ọ bụ na njedebe nke ụbọchị maka ụfọdụ ngwaahịa na-akwụ oke ha ma ọ bụrụ na ị rịa ọrịa, ọ bụrụ na ịnwụ n'ọrụ gị, ọmụrụ nwa na-arị elu, wdg, ọ nwere ike ịbụ ọta kachasị mma megide ihe atụghị atụ anya na-atụgharịghị anya. iji debanye aha ụdị ego ọ bụla na, ya mere, ụzọ iji chebe megide ọdịdị nke ihe ndị a nwere ike inye ntụziaka a zụrụ azụ amaghị ama.
Ndị insurers na-ewepụta atumatu nchedo onwe ha iji mepụta ego na mbinye ego maka ndị chọrọ ikpuchi maka mmebi akụ na ụba nke nwere ike iduga ha iburu ọrụ a n'aka ndị nketa ha, sitere na ọnọdụ ọnwụ akaghi aka ma ọ bụ nkwarụ zuru oke na-adịgide adịgide yana, ebe ụgwọ dị oke ụgwọ Onye na-akwụ ụgwọ ga-ewere ụlọ ọrụ akwụmụgwọ.
Nọgide na-enweghị ọrụ ma ọ bụ na-agbanwe ọrụ n'okpuru ọnọdụ nkwekọrịta ka njọ abụghị iwu ndị a, n'agbanyeghị na ọ na-atụgharị uche n'ịkwụ ụgwọ ego nke isi obodo niile ma ọ bụrụ na ndị ahụ ịnshọransị enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla akwụ ụgwọ n'ihi ọnọdụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọnụahịa nke iwu gị dabere na mkpuchi a debanyere aha, mana karịa ihe niile na ego agbazinye ego ma ọ bụ ihe fọdụrụ ka eweghachite, na agbanyeghị ha nwere ego kwa afọ, agbanyeghị na enwere ike kewaa ya n'ime oge dị ala, ya bụ, kwa ọnwa , kwa ọnwa, kwa ọnwa na ọkara kwa afọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọrụ kachasị achọ bụ nke metụtara ajụjụ na obi abụọ banyere ọnọdụ nke ihe egwu gbasara iwu. Ekele dịrị ya, ọ ga-ekwe omume ịnwe ndụmọdụ gbasara ndị ọka iwu, nke ndị ọka iwu nwere ahụmịhe na ngalaba ọ bụla na-enye, nke ga-enyere anyị aka ịme mkpebi ndị dabara adaba dabere na ọdịmma anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu otu esi echedo nchebe iwu na azụmaahịa kọmputa?